HAMRAKHABAR | » प्रदेश पनि लगडाउन घरदेश पनि लगडाउन मलेसियामा भइयो अलपत्र प्रदेश पनि लगडाउन घरदेश पनि लगडाउन मलेसियामा भइयो अलपत्र – HAMRAKHABAR
प्रदेश पनि लगडाउन घरदेश पनि लगडाउन मलेसियामा भइयो अलपत्र
फाेटाे क्याप्सन : संखुवासभाका पुर्ण जिमी जाे घर फर्कने प्रतिक्षामा मलेसियामा १४ दिन फुर्सदमा बसेका छन ।
संखुवासभाका पुर्ण जिमी नेपाल र मेलेसियाको सामान्य अवस्था भएको भए आज भन्दा १३ दिन पहिले प्रदेश बाट घरदेश पुगि सकेका हुने थिए । कम्पनि सग सम्झौता सकेर घर जान तयारी अवस्थामा बसेका जिमी यतिबेला मलेसिया र नेपालको लगडाउनको फन्दामा दिक्क मान्दै बसिरहेका छन । सारा विश्वलाइ नै रुवाइरहेको महामारी कोरोना भाइरसको त्रासका कारण उनी कार्यरत देश मलेसिया र मातृभुमी देश नेपाल यतिबेला एउटै समयमा लगडाउनमा छन ।
लकडाउन ले उनि न यता न उता का भएका छन । जिमी भन्छन ‘जिउँदो त यस्तै हो मरेनी लास नेपाल पुग्न गाह्रो छ जस्तो लाग्न थाल्यो’ कसलाइ के भन्नु ? जिमि निकै खिन्न भएका छन उनी भन्छन् सरकार मलाइ नेपाल पुग्ने वातावरण बनाइदे । कम्पनी सग सम्झौता सकियो नेपाल बाट पैसा मागेर मलेसियामा भात खान्छु यसरी कति दिन चल्ला ? जिमि मात्रै होइन कन्ट्याक्ट् सकिए बसेका यस्तै पिडा मलेसियामा सयौ नेपाली सग छ ।
अहिले पिडा परदेशमा पनि उस्तै छ घरदेशमा पनि उस्तै छ । फरक यति हो घरदेश भनेको घरदेश हो परदेशमा हुने पिडा झन बढि पिडा । सुरक्षागार्डका सुपरभाइजर कार्यरत प्युठानका चित्र मगर भन्छन यहाँ कम्पनी साहु बाट खासै समस्या छैन, पैसा देखी स्वास्थ सुरक्षाको लागी सक्दो गरेकै छ, तर कम्पनी सग सम्झौता सकिएर घर जाने तयारीका साथीहरुको विजोग भयो ।
रोजगारिको लागि आकर्षक गन्तव्य मानिने मलेसिया यतिबेला कोरोना संक्रमणले प्रभावित बनेको छ । त्यहाँको रोजगारि अवस्था पुर्ण रुपमा थला परेको जस्तै छ । त्यहाँ पनि सरकारले अप्रिल १५ सम्म देशलाई लगडाउन गरेको छ ।लगडाउन पछि नेपाली राजदुताबासले विज्ञप्ती जारी गरि मलेसिया सरकारले लागु गरेको लगडाउन पुर्णरुपमा पालना गरि सुरक्षित हुन अनुरोध समेत गरेको छ ।
लगडाउन भए पछि मलेसियाको अवस्था पनि नेपालको जस्तै छ । मलेसियामा यो समाचार तयार गर्दा सम्म कोरोना सक्रमित २ हजार ३ सय २० रहेका छ भने २७ जनाकाे निधन भैसकेको छ । हाल सम्म नेपाली भने कोही संक्रमित भएका छैनन, त्रास भने नेपालीमा औधि छ । करिव १० लाख हाराहारीमा नेपाली कार्यरत मलेसियामा नेपालीको अवस्था के कस्तो छ त ? खासै मिडियामा चर्चा छैन । किन भने मलेसियामा कोरोना संक्रमित र मृत्युदर कमै भएकाले पनि चर्चा कमै भएको हुनुपर्छ ।यद्यपी नेपालको भन्दा संक्रमित र मृत्यु सख्या मलेसियामा बढि छ ।
केही दिन अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली मजदुरहरु कार्यरत देशहरूमा आफ्ना नागरिकको अवस्था के कस्तो छ भन्दै बिभिन्न देशहरु जानकारी लिएको खबर आएको थियो । साथै परराष्ट्र मन्त्रालयले दुताबाँस हुदै सम्बन्धित देशलाई नेपाली मजदुरको गाँसबास र स्वास्थ सुरक्षामा ध्यान दिन समेत अनुरोध गरेको थियो । सरकारले गरेको यो अनुरोधको अनुभुती भने नेपाली मजदुरले गरेका छन की छैन ? यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित नेपाली दुताबासको हो ।
मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरुको नेपाल सरकार र दुताबास प्रति तिव्र गुनासो रहेछ । सरकारले हामीलाई के कस्तो छ भनेर कहिले सोध्छ र ? हामी आफैंले हामीलाई यस्तो भयो भन्दा त वास्ता गर्दैन दुताबास सग कुनै आस नै छैन एक मजदुरले दुखेसो पोख्छन । अहिले सर्वत्र संकट र समस्या भएपनि नेपालीहरु दुताबासको विगतको कार्यशैलीका कारण यतिबेला पनि तिव्र आक्रोस पोख्छन । दुताबास खाली फेसबुक लाइभमा आएर हात यसरी धुनु यस्तो गर्नु मात्रै भन्छ हाम्रा समस्याको जवाफ दिदैन नेपालीहरुको दुताबास प्रति आरोप छ ।
विषेश गरि कोरोनाको असर कम्पनी सग सम्झौता सकिएका र सुरक्षा गार्डमा कार्यरतहरुलाइ बढि छ । कम्पनीमा कार्यरत मजदुरलाई भन्दा सुरक्षागार्डमा कार्यरतलाई जोखिम भएको मलेसियमा कार्यरत नेपालीहरु बताउछन । कम्पनीमा कार्यरतहरु सेल्फ क्वारेन्टाइन मा छन । उनिहरु लाई बिदा छ जोखिम कम छ ।तरसुरक्षागार्डहरु अनिबार्य डिउटीमा जानै पर्ने भएपनी मास्कको भरमा डिउटी गरिरहेका छौ । कम्पनी सग सम्झौता सकिएपछि घर आउन तयार भएर बसेकाहरु नेपालको विमानस्थल बन्द भएपछि यता न उता का भएका छन । कम्पनी सग सम्झौता सकिएर घर आउन तयारी गरेका २७७ बढी नेपालीहरु मलेसियामा अलपत्र अवस्थामा छन ।